“Karim Benzema Ayaa Ka Dhamaystiran Thierry Henry, Waanu Ka
Weeraryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Lyon ee Sidney Govou ayaa rumaysan in xiddiga Real Madrid ee Karim Benzema uu yahay ciyaartoy dhamaystiran oo ka wanaagsan halyeygii Arsenal iyo xulka France ee Thierry Henry.
Karim Benzema ayaa xili ciyaareedkan ku qaatay Real Madrid mid ka mid ah waqtiyadiisii ugu wanaagsanaa, waxaanu dhaliyey 21 gool oo horyaalka LaLiga ah 34 ciyaarood oo uu dheelay, waxaanu sigay abaal-marinta Pichichi oo uu Lionel Messi kaga guuleystay afar gool oo laba ka mid ah uu ciyaartii u dambaysay dhaliyey.
Sidney Govou oo u warramay wargeyska L’Equipe ayaa sheegay in Benzema uu dhaafay heerkii Thierry Henry oo uu yahay ciyaartoy dhamaystiran oo ka wanaagsan, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay inuu inta badan gaadhay heerkii Thierry.
“Thirry aniga in badan ayuu ixiiso gelin jiray, sababtoo ah wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu dheereeya isaga oo kubadda wata, laakiin Karim ayaa ka dhamaystiran. Mar walba waa ciyaartoy soo jeeda oo ciyaartoy sare ah. Haddii aad jeceshahay kubadda cagta, suurtogal maaha inaad jeclaan weydo Benzema.”
Hadalka Sidney Govou ayay dood badan ka dhalan kartaa, sababtoo ah, Thierry Henry wuxuu ahaa ciyaartoy guulo badan gaadhay oo ay ku jiraan koob adduun, inkasta oo dhinaca horyaallada iyo Champions League uu kaga badan yahay Karim Benzema oo tan iyo sannadkii 2009 tiir dhexaad u ahaa Real Madrid.
Sidney Govou waxa uu ku andacooday in Benzema uu leeyahay hoggaamin wanaagsan oo la mid ah Sergio Ramos, waxaanu ku tilmaamay inuu ka mid yahay weeraryahannada ugu wanaagsan, isaga oo yidhi: “Aniga lama yaabbani guulaha Karim. Mar walba waxaan u haystaa inuu yahay mid ka mid ah weeraryahannada ugu wanaagsan Yurub.
“Dhibaatooyin yar ayuu la kulmay bilowgii Real Madrid, sababtoo ah waxay ahayd inuu guuleysto, laakiin masaafo layaab leh ayuu jaray sannadihii ugu dambeeyey. Markii uu tegay Cristiano Ronaldo waxa fuushay masuuliyad, waana hoggaamiye dhab ah.”